भ्रष्टाचारमा कास्की पहिलो स्थानमा, कुन जिल्ला भ्रष्टाचारको कुन स्थानमा ? « Naya Page
भ्रष्टाचारमा कास्की पहिलो स्थानमा, कुन जिल्ला भ्रष्टाचारको कुन स्थानमा ?
प्रकाशित मिति : 12 September, 2019 8:21 am
बागलुङ, २६ भदौं । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये बागलुङ भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको सूचीमा पाँचौं स्थानमा देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा परेका उजुरीका आधारमा बागलुङ भ्रष्टाचार हुने पाँचौं जिल्लाका रुपमा सूचीकृत भएको हो ।
बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्लाको सूचीमा कास्की पहिलो, छिमेकी जिल्ला पर्वत दोस्रो, तनहुँ तेस्रो र स्याङ्जा चौथो स्थानमा छन् ।
बागलुङमा मात्रै ४९ उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमा २६ फछ्र्यौट भएको अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षत्रीय कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले बताए ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने, बढी सामान खरीद गर्ने, लागत स्टिमेट तयारी बदनियतपूर्ण तरिकाले गर्ने, नक्कली बिल भर्पाइ बनाई भुक्तानी दिने तथा ठेकेदार र प्राविधिकसँग अवाञ्छित गतिविधि गर्ने र हिस्सेदारी खोज्ने जस्ता विषयमा आयोगमा उजुरी परेको जनाइएको छ ।